Ungawenza Kanjani Ama-imeyili Wakho Okufinyelela Ukuze uthole Izimpendulo Ezinhle Kakhulu | Martech Zone
Wonke umthengisi uyazi ukuthi abathengi banamuhla bafuna umuzwa owenziwe waba ngowakho; ukuthi abaseneliseki ngokuba nje enye inombolo phakathi kwezinkulungwane zamarekhodi wokukhokha. Eqinisweni, inkampani yocwaningo iMcKinsey ilinganisela ukuthi ukudala i- ngezifiso isipiliyoni sokuthenga ingakhuphula imali efinyelela kuma-30%. Kodwa-ke, ngenkathi abathengisi kungenzeka ukuthi benza umzamo wokwenza ukuxhumana kwabo ngokwezifiso namakhasimende abo, abaningi bayehluleka ukusebenzisa indlela efanayo yokuthola amathuba okufinyelela i-imeyili.
Uma amakhasimende afuna ukwenza ngezifiso, kungacatshangwa ngokunengqondo ukuthi abathonya, ama-blogger, nabanikazi bewebhusayithi bazobe befuna umuzwa ofanayo. Ukwenza ngezifiso kuzwakala njengesixazululo esilula sokwenza ngcono izinga lokuphendula, akunjalo? Impela. Kepha ukwenza ngezifiso ekufinyeleleni i-imeyili kuhluke kakhulu ekwenzeni ngezifiso ekumaketheni abathengi, futhi yingakho abanye abathengisi bengahle bangaboni impumelelo ecacile.
Ekumaketheni kwabathengi, abathengisi kungenzeka ukuthi bahlukanise oxhumana nabo futhi badale ukukhethwa okuncane kwama-imeyili ukunxenxa wonke umamukeli okulelo qembu. Emikhankasweni yokufinyelela, noma kunjalo, ukwahlukaniswa kweqembu akwanele. Ama-pitches adinga ukwenziwa abe ngezinga lomuntu ngamunye ukuze abe nemiphumela oyifunayo futhi eyiyo futhi lokhu, empeleni, kusho ukuthi kunesidingo sokwenza ucwaningo oluphakeme.
Ukubaluleka Kocwaningo Ekufinyeleleni
Kungaba yinselelo enhle - uma kungenakwenzeka - ukwenza ngezifiso iphimbo ngempumelelo ngaphandle kokwenza ucwaningo olunzulu kuqala. Ucwaningo lubalulekile, ikakhulukazi ngesikhathi lapho lowo owayeyiNhloko ye-Web Spam Matt Cutts owayeyi-Google ekhuluma ngokubhuloga kwezivakashi ukuba abe 'ngokwengeziwe nangaphezulu umkhuba we-spammy'. Ama-Blogger afuna okuningi; kubantu abenze umzamo wokuthi imibono yabo izwakale.
Kodwa-ke, 'ukucwaninga', kulokhu, akukhona nje ukwazi igama lomuntu nokukwazi ukukhumbula isihloko seposi lebhulogi lakamuva; kumayelana nokujwayeza imikhuba ye-inthanethi yomamukeli wakho, izintandokazi zabo, kanye nalokho abakuthandayo ngenhloso yokuzibandakanya… ngaphandle kokubonakala kakhulu njenge-stalker ye-inthanethi!
Izindlela ze-4 zokwenza ama-imeyili akho abe ngewakho ngocwaningo
Uma kukhulunywa ngokufinyelela emphakathini nokwenza umbono wokuqala oqinile futhi obalulekile, kubalulekile ukuthi abathengisi bangaweli ogibeni lokwenza okuvamile imeyili ukumaketha amaphutha. Ama-pitches enziwe ngezifiso angaba nzima ukuthola okulungile, kepha lawa macebiso ama-4 okwenza ngokwezifiso ama-imeyili wokufinyelela angathuthukisa amathuba okuphumelela:
Yenza ngezifiso Umugqa Wakho Wesihloko - Indawo yokuqala ukuqala ngomugqa wakho we-imeyili. Ucwaningo lukhombisa ukuthi umugqa wesihloko owenziwe ngezifiso unga ukwandisa amanani avulekile ngama-50%, kepha iyiphi indlela engcono yokwengeza ukuthintwa kokwenza kube ngokwakho kunhlokweni wakho? Kulokhu, kumayelana nokwenza ngezifiso okomzwelo kunokuzenzela ngqo. Ukungeza nje igama lomamukeli wakho kulayini wakho wesifundo ngeke kusike. Empeleni, empeleni lokhu kungaba umkhuba olimazayo njengoba sekusheshe kwaba isu elijwayelekile elisetshenziswa yizinkampani ezithumela ama-imeyili okuthengisa angacelwanga. Esikhundleni salokho, zama ukugxila ohlangothini oluvusa imizwa lwezinto; ukuqondiswa kwenzalo. Spin imibono yokuqukethwe ukuhlangabezana niche yomamukeli, bese ukhumbula: the amagama amabili okuqala kwanoma yimuphi umugqa wezihloko ubaluleke kakhulu! Umthombo wesithombe: Neil Patel
Khomba amanye amathuba wokwenza ngezifiso - Umugqa wesihloko akuyona ukuphela kwendawo lapho kungenzeka khona ukwengeza ukuthinta kokwenza kube ngokwakho ku-pitch. Cabanga uma kukhona amanye amathuba wokwenza iphimbo lakho ngendlela oyifisayo ukuze uhlanganyele kangcono nomamukeli. Manje yisikhathi sokubambeka ngempela ocwaningweni. Isibonelo, empeleni akukho okuthandwa ngumuntu wonke ohlotsheni lokuqukethwe. Ngenkathi abanye bekhetha ukubona ama-athikili, abanye bakhetha ukubonwa kwe-infographics nokunye ukubona idatha, abanye bakhetha izithombe namavidiyo, abanye bakhetha ifomethi yokukhishwa kwabezindaba. Yini umamukeli ayithandayo? Vele, noma yiziphi izixhumanisi ezifakiwe kuphimbo lomsebenzi wakho kufanele zihambisane nezintshisekelo zomamukeli, bese uzama ukufaka amanye amagama abo kanye nethoni yezwi kokuqukethwe kwakho. Umthombo Wezithombe: Okubi kakhulu
Yiya Phezulu Naphezulu - Kwesinye isikhathi, amathiphu woku-1 no-2 awodwa awanele ukunikeza amathuba okufinyelela ngokuhlangenwe nakho okwenzelwe wena ngokuphelele. Kungadingeka ukuthi uhambe ngaphezu nangaphezulu ukuze uvelele. Cabanga ngokubhekisa kokuthunyelwe okufanele kuma-blogs umamukeli abhekise ngqo kuye esikhathini esedlule, noma ngisho nokubhekisa kokuthunyelwe kwabo kubhulogi ngomzamo wokuhlobanisa imibono yabo nemibono yakho. Mhlawumbe uze wenze izincomo zeminye imithombo abangaba nentshisekelo ngokuya ngokuziphatha kwabo nezenzo zabo eziku-inthanethi. Uma umamukeli esebenzisa ukubukwa okuningi ukuthola iphuzu lakhe, lingisa lokhu ebaleni. Ukusetshenziswa kwezithombe-skrini ezifanele, isibonelo, kungaphoqa umamukeli ukuthi anake kakhulu.
Wasebenzise Ngokugcwele Amathuluzi Atholakalayo - Akunakuphikwa ukuthi ukwenziwa komuntu ngamunye kumamukeli ngamunye - ngokungafani nokwenza ngezifiso uhlu lwamakhasimende ahlukaniswe ngamakhompiyutha - kuthatha umzamo omkhulu abathengisi abaningi abanaso nje isikhathi sabo. Lokhu akusho ukuthi izinkundla ze-imeyili azikwazi ukwenziwa ngezifiso. Eqinisweni, ama-imeyili angenziwa ngezifiso kusetshenziswa amathuluzi wokumaketha azenzela izinto eziningi zenqubo. Lawa mathuluzi angasiza ekuboneni izintshisekelo ze-blogger ngokuhlaziywa kokuqukethwe, kanye nokulandela umkhondo wokuxhumana okungenayo nokuphumayo ukunika amandla abathengisi ukubuyela ngokushesha futhi kalula ezingxoxweni ezedlule. Kwezinye izimo, kuyadingeka ukusebenzisa la mathuluzi atholakalayo ukuqinisekisa ukuthi umkhankaso wokufinyelela uyaqhubeka nokusebenza kahle.
Ukuthola Ukulinganisela Okufanele
Iseluleko sokugcina esiwusizo ngenhla, ngenkathi sizuzisa, sivula ikani elikhulu lezikelemu. Ukwenza ngezifiso kuyinto ehluke kakhulu futhi engayodwana, futhi ukwakha ubudlelwano obuqinile bomuntu nomuntu imvamisa akukwazi ukufinyelelwa ngempumelelo ngokusebenzisa i-automation kuphela. Ukuthola ibhalansi elungile phakathi kokufaka okwenziwa ngesandla kanye ne-automation eyengeziwe kungukhiye ekwakheni ama-pitches aqondene nawe akhuthazayo, ahlanganyele futhi aguqule.
Tags: imeyiliOkuqukethwe kwe-imeyiliukufinyelela i-imeyiliukwenza ngezifiso i-imeyiliiphimbo le-imeyiliukufinyelelapr imeyilipr ukufinyelelapr iphimboukufinyelela ebudlelwaneni bomphakathiiphimbo lobudlelwano bomphakathi
Ingxoxo yevidiyo Iqhubeka Ngokujwayelekile Kwamawebhusayithi Ebhizinisi kanye Nezingxenyekazi ze-Ecommerce